Intshebe yamanga emadodeni, isetshenziswa kanjani? | Amadoda aSitayela
U-Ignacio Sala | | Ukunakekelwa komuntu siqu
Selokhu kwafika imfashini ye-hipster enezintshebe zabo ezijulile, abaningi bekungabantu, okungenzeka ngenxa yokuntula isifiso noma ubuhle, baqala ukukhulisa lezo zintshevu ezijulile zalo mkhuba omusha, ohlotshaniswa nokuvuna, yize singakufaka kuma-20s, lapho lolo hlobo lwentshebe lwalungubuhle obujwayelekile ngaleso sikhathi.
Kubasebenzisi abaningi iyi- ukuhlukunyezwa kwangempela okufanele kugunde nsuku zonke, kepha kuya ngesikhundla sabo somsebenzi, uma kuphambi komphakathi noma ehhovisi, abanakho okunye abangakwenza. Uma befuna ukukhulisa intshebe esezingeni eliphakathi nendawo, kuzofanele balinde amaholide ukuze balinde ukuthi ikhule ngokwanele ukuze bakwazi ukuyibumba futhi bangabukeki bengahlonizi.
Ngakolunye uhlangothi, uma umsebenzi wakho ungabhekile umphakathi, noma noma umphakathi osebenzisana nawo nabalamuli nje, isici sobuhle singena ngemuva, lapho okwamanje ufuna khona ungakhulisa intshebe bese uqala ukuyibumba njengoba ikhula.
Ngakolunye uhlangothi, uma ungenazinwele noma omunye walabo bantu abanezintshebe eziphuma ezindaweni ezahlukahlukene zobuso hhayi endaweni ejwayelekile, unenkinga enkulu uma ufuna ukujabulela intshebe, imbuzi noma nje amadevu. Ku-intanethi singathola izixazululo ezahlukahlukene, ezingaphezulu noma ezingaphansi kobuchwepheshe, lokho sivumele ukuthi sijabulele ngokushesha uhlobo lwembuzi, intshebe noma amadevu.
1 Izintshebe zomgunyathi
2.2 Ukusebenzisa isipanji
4 Izinwele zemvelo ezine-Vaseline
Kepha uma ukungabi nentshebe kuyinkinga yobuhle kuwe, okuwukuphela kwekhambi ukuthola intshebe engamanga, efana nezinsimbi zamadoda, njengamanje akhiqizwa ngezimfanelo ezahlukahlukene, size sinikeze nemiphumela yobungcweti obukhulu, ngoba ukuqeda kusinikeza imbuzi esikwe kahle noma intshebe lapho zonke izinwele eziyibhalayo zisikwa ziye kubude obufanayo, ngaphezu kokunye ukwenziwa ngezinwele zemvelo.
Izintshebe ezahlukahlukene, izinkinobho ngisho nokushiswa okuseceleni, singakuthola ngemibala ehlukene kanye namahlamvu avumelane nakho konke ukuthanda. Ngaphakathi kwezintshebe zamanga, okulula ukuzithola kukhona izintshebe ezigcwele namadevu. Ngokuya ngesabelomali esinaso, singathola amamodeli aphelele futhi asezingeni elihle, kusuka ku-100 euro.
Lezi ntshebe namadevu zisinikeza ikhwalithi nesiqinisekiso esingakutholi uma sizinikezela ekufuneni lolu hlobo lwemihlobiso yobuso. ezitolo ezingezona ezikhethekileNgakho-ke, inketho engcono kakhulu ukuya ezikhungweni ezinikezelwe ekwakhekeni kobuchwepheshe, lapho ukwakheka kwezinhlamvu kujwayelekile futhi bajwayelene nakho. Lezi zinhlobo zezitolo zivame ukutholakala emadolobheni amakhulu kuphela, kepha isikhathi esithile ukuba yingxenye, singathola nemikhiqizo yazo ngamakhasi ewebhu.
Inkinga yokwenza izimonyo, esetshenziswa kabanzi ukufihla ukungapheleli kwesikhumba ngabesifazane nabesilisa, yilokho ayikwazi ukulingisa ukuthungwa kwentshebe, kepha uma okungenani ukubonakala kwalo, ikakhulukazi uma sifuna ukukhombisa umququ izinsuku ezimbalwa ngaphandle kokugunda. Ukusetshenziswa kwe-mascara yamehlo, ngenxa yokuxubha kwayo, kuyindlela enhle, ngoba ukwahlukaniswa kwemicu yebhulashi kusivumela ukuthi silingise ukwehlukaniswa kwezinwele.
Kulolu hlobo lwentshebe, kufanele sisebenzise isiponji sendabuko esibonisa izimbobo ezijwayelekile zesipanji. Ngombala wentshebe kufanele sisebenzise a ukhilimu wombala wentshebe ukuthi sifuna ukulingisa, okusobala ukuthi kufanele kufane nombala wezinwele zethu. Ukwenza le nqubo, kubalulekile ukuthi ngaphambili usike isipanji sibe izingcezu ezincane esivumela ukuthi sihambe sizungeze imiphetho yobuso.
Uma sesikhulelise ukhilimu esponjini, kufanele sicindezele isipanji kancane ebusweni ukuze sikwazi ukushiya amamaki azomela uphawu. Khumbula ukuthi ngaphandle kokucindezela kakhulu, umaki ozosala uzoba umfaniswano omkhulu futhi ngeke ube muhle ngobuhle.
Amabhulashi avumela ukwakheka ukusabalala ebusweni bonke nawo alungele maka isithunzi sentshebe, uma esikufunayo yilolo hlobo lwentshebe. Ngokufiphala okuhambisanayo nebhulashi singasabalalisa ukwakheka kuyo yonke indawo lapho intshebe kufanele ikhonjiswe khona. Le nketho ingenye yezinto ezishibhile futhi ezingabonakali ukuxazulula inkinga yentshebe.
Kuze kube namuhla, impandla kuseseyinkinga okungekho ilabhoratri ekwazile ukuyinikeza isisombululo, noma ngabe bakukhangisa kangakanani ukuvuselelwa kwezinwele endaweni lapho izinwele zivele khona. Ngakho-ke, enkingeni yempandla, asikho isisombululo esitholakele, njengoba ikhula izinwele eziyisimangaliso, ayikho nokuthi abantu abakhulisa izintshevu ezindaweni futhi bafuna ukuqedela ezinye izindawo zobuso lapho zingafinyeleli khona kuvela izinwele. Ngakho-ke lesi sixazululo silahlwa ngokuphelele. Usuku lapho singaboni khona impandla emgwaqweni, kungaba yisikhathi sokuqala ukusebenzisa ukukhula kwezinwele.
Izinwele zemvelo ezine-Vaseline
Esinye isisombululo sesikhashana esingahle sibe nokuqina okude kakhulu, okulungele ukuzibonakalisa ngemvunulo ngokwesibonelo, ukusebenzisa i-petroleum jelly ngezinwele zemvelo. EMpumalanga izinwele zemvelo kumele zivele kumuntu okukhulunywa ngaye ukuthi uzoyisebenzisa, ngaphandle kwalokho umehluko wombala ungadonsela ukunakwa okuningi.
Leli qhinga elincane ukusabalala ngaphezulu kobuso lapho sifuna ukufaka khona izinwele isisekelo se-silicone engasindi, kepha hhayi abicah bezimboni abasetshenziswe ekwakhiweni, kepha abicah ekhethekile asetshenziselwa ukwakheka. Lapho sesisabalalise ungqimba olufanayo ngasemgqeni wobuso, kufanele siqale ukunamathisela izinwele kulezo ndawo okukhulunywa ngazo. Khumbula ukuthi izinwele kufanele zibe ngaphezulu noma ngaphansi ngobude obufanayo, ngaphandle kwalokho kungaba yinto ehlekisayo.
Akucebisi ukusebenzisa izinwele zezilwane, njengoba ngibonile kumavidiyo amaningana, ngoba ukuguquguquka kwayo kuhluke kakhulu kunenwele yomuntu, ngaphezu kokwehluka kombala.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Intshebe yamanga yamadoda esimanje
Ngingathanda ukwazi ukuthi ngibathenga kuphi eMexico nasezweni laseMexico
Ungangitshela ukuthi selivele liyathengiswa eMexico nokuthi kuphi, ngiyabonga?
Ngidinga ngokuphuthumayo ukuthola intshebe, ngingayithenga kuphi eMexico City?
ULuis Hernandez kusho
MOLA! Kepha yeka ukuthi ibukeka kahle kanjani le ntshebe yamanga, ngicela ungitshele ukuthi ingatholakala yini eMexico nokuthi kuphi !!!!!! ncenga !!!!!.
Phendula u-luis hernandez
Ngingathanda ukwazi ukuthi umkhiqizo uzoba nini eMexico nokuthi uma kungenjalo ngincoma othile ukuthi asakaze ichibi elifanayo
UCarlos Ramos kusho
Hahaha uyakwenza lokho ngempela uma kungukuqanjwa okuhle, ngokwami ​​anginayo leyo nkinga ngoba ngineentshebe lapho ngifuna khona, kodwa kubo bonke abangenazo izinwele muhle kakhulu, kodwa ihlala isikhathi esingakanani noma ini?
Ngifuna imihlobiso yohlobo lwentshebe pharaoh pk ngenza izindwangu kepha ziswele okuthile
josue sosa kusho
Ngingathanda ukwazi ukuthi ngiyithathaphi, ngilindele impendulo yakho.Ngivela e-Oaxaca, eMexico.
Phendula ku-josue sosa
sawubona e-Argentina uyayithola yini leyo mikhiqizo?
Ngikunikeza izinqa ezithile hahahaha
Ngingathanda ungithumelele ikheli eRancagua
ukuthenga intshebe yangemva kokulinganisa
Ngidinga izintshebe ezingekho emthethweni ezibukeka zingokoqobo.
Izindawo zokuthenga nezindleko.
miguel sanchez kusho
Sawubona kahle, ngivela eTacna-Peru futhi ngithanda ukwazi ukuthi ngingakutholaphi, ngiyidinga ngokushesha. Ngiyabonga
Phendula ku-miguell sanchez
bawuthengisa kuphi lowo mkhiqizo
Phendula ukuze ubhalise
ngingayitholaphi eToluca mexico
Uyangizwa ungithethelele kepha ngidinga ukwazi ukuthi bathengisa kuphi i-postisa varva ngicela unganginika noma ungithumelele imibiko
Ngingathanda ukwazi ukuthi ungayithenga kuphi enye yalezi eGuatemala noma ukuthi ungayithenga kanjani ngewebhu ...
Manuel Rosales placeholder image kusho
Sawubona, ngiyaxolisa, ngingayithathaphi eMonterrey?
Ngithenga intshebe yamanga ngokuphuthumayo, i-hit izoshesha. Ngilangazelele impendulo yakho.
Ngithenga isilevu esiphuthumayo samanga esiphuthumayo ngivela eLima peru inkokhelo izokwenziwa ngokushesha ngilindele impendulo yakho
Sawubona jhanses, ngifisa ukwazi ukuthi ukwazile ukuthenga intshebe engamanga, kuphi futhi kangakanani, ngicela ungiphendule
UJEAN ANDERSON GARZON kusho
Sawubona, NGIYAFUNA UKWAZI ECOLOMBIA UKUTHI NGITHOLA LOLU HLOBO LWEZINTSHEBE EZINHLE NGIYABONGA. UJEAN A.
i-germosilla yaseJalimane kusho
Ngingayitholaphi eMexico noma ngisebenzise intshebe engamanga namadevu
kusukela kwisikhangiso se-make up
Phendula i-germosilla yesiJalimane
UJose Esteban kusho
Ngingathanda ukwazi ukuthi bayithengisa kuphi eDominican Republic
Ngifuna ukwazi ukuthi ngingawuthenga kanjani lo mkhiqizo online
Petro Velez kusho
ukuheha okungenazinwele ungabi amaswidi, izintshebe ziphuma kuphela kwabesilisa
Phendula ku-petro velez
Ngingathanda ukwazi ukuthi bayithengisa kuphi eColombia kanye nenani ngoba nginentshisekelo (: ngiyabonga ………………
Ngidinga ukuyithola ngokushesha. ngazise ukuthi ngizowathola kuphi eColombia.
Ngidinga ukwazi ukuthi ngizithenga kanjani izintshebe nge-inthanethi !!
INDLOVU EPHAKATHI kusho
KUDINGEKA UKWAZISWA NGOMKHIQIZO KUMANJE KuseMEXICO LAPHO UNGATHENGWA NOMA IKHASI ELINGAKHO KU-INTERNET UKUTHENGA
Phendula ku-TERIUCE ESPINOSA
umoya wokushayisana kusho
Ngingayithenga kuphi futhi ibiza malini? phendula ku brisaseminario1@hotmail.com
Phendula kumhlangano womoya
La ma-mustache abukeka emuhle kimi, ngivela ePeru, ngingawathenga kanjani, ngicela uphendule brisaseminario1@hotmail.com
Ngingathanda unginike iwebhusayithi lapho ngingathenga khona
ingaphanga ama-osorio cortes kusho
Yeka umkhiqizo omuhle enginentshisekelo kuwo, ngingawutholaphi lapha eColombia, ngiyabonga kakhulu….
Phendula kuma-robert osorio cortes
Roberto torres kusho
Ngidinga intshebe namadevu eGuatemala
Phendula ku-roberto torres
Ibukeka kahle kakhulu, ngingayithenga kuphi eMexico?
Tony hanamichic kusho
Ngingathanda ukwazi ukuthi ngingayithenga kuphi ePeru
Phendula ku-tony hanamichic
Ngingayithenga kuphi eGuatemala, ngidinga ukukubonga ngokushesha
Ngingayithenga kuphi ngivela eLima Peru
UCristina Garcia kusho
Ngingumbumbulu futhi ngizinikela ekwenzeni zonke izinhlobo zezengezo zezinwele, noma ngabe izintshebe, amadevu, ukubamba eceleni, noma amawigi. Kungokwemvelo ngokuphelele, ngithumela emhlabeni wonke. Ukuxhumana nami ngikushiya i-imeyili.
Phendula uCristina García
ezokuvakasha zasemakhaya eValencia kusho
Kuyangimangaza ukuthola le bhulogi. Bengifuna ukukubonga ngokuthumela lobu bumnandi. Impela ngikujabulele konke okukuwo. Ngikumake ukuze ngibone izinto ezintsha eziningi ezivela kule bhulogi.
Phendula kwezokuvakasha zasemakhaya e-valencia
i-alfredo yesibili montalban jimenez kusho
Ngidinga ukuthenga intshebe poztiza ePeru, ngenza kanjani?
Phendula ku-alfredo montalban jimenez wesibili
U-Andres I Rodriguez kusho
Ngingathanda ukwazi ukuthi ngithola kuphi intshebe ebukeka ingeyemvelo, kodwa kuncane kakhulu, ngihlala eLos Angeles California 90020.
Phendula u-Andres I Rodriguez